Ilay saka arabo Mau atletika | Noti saka
Ilay saka arabo Mau mpanao fanatanjahan-tena
Ny saka ny karazany Arabo mau Teratany volom-borona tsara tarehy any Arabia izy io, na dia mbola tsy fantatra loatra aza izy io, dia manamboatra tsikelikely ao an-tranon'ireo mpidoroka saka tandrefana.
Fijery maneho hevitra, tia mihazakazaka sy milalao ity lavalava mahafinaritra ity, fa kosa ho tianao koa ny ho ivon'ny fiheveran'ny olona tianao indrindra.
1 Ny niandohany sy ny tantaran'ny Mau arabo
4 Mikarakara ny Mau arabo
4.5 Fitiavana sy orinasa
5 Inona ny vidin'ny Mau arabo?
6 Sarin'ny saka arabo Mau
Ny niandohany sy ny tantaran'ny Mau arabo
Ny Arabo Mau Karazana saka iray niseho tampoka tao Moyen Orient izy io, izay nipetrahany irery mandra-pahatongan'ny olona nihamaro hatrany. Rehefa nitranga izany dia takatr'ilay totohondry fa afaka manana sakafo maimaimpoana izy amin'ny toerana tsy dia tsara loatra ny fiainana, ary koa orinasa.
Niala tsikelikely izy io, very ny endri-javatra sasany tamin'ny razambeny vokatry ny fiampitana niaraka tamin'ny karazana saka hafa nentina avy amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao. Na izany aza, tsy fantatra izany raha tsy tamin'ny 2004, rehefa nanomboka nisafidy kittens i Peter Mueller. Rehefa afaka 4 taona, nahazo ny karazany eken'ny World Cat Federation (WCF).
Saka ity misy vatana matanjaka, hozatra ary atletisma izay milanja 4 ka hatramin'ny 6kg. Ny lohany dia boribory amin'ny endriny, miaraka amin'ny saokany somary voatonona ary sofina lehibe sy telozoro, voafitaka kely. Matanjaka ny tongotra, natao mba hivezivezena lavitra.
Malama ny palitao, ary mety volontany sy volondavenona ary misy mototra.. Ny mainty sy fotsy dia ekena raha tsy misy pentina. Manana fe-potoana maharitra 14 taona izy.
Tia manao fanatanjahan-tena ny Mau Arabo. Izy io dia biby izay, na dia afaka mampifanaraka ny fiainana amin'ny fisaka aza, hiaina tsara kokoa ianao ao amin'ny trano misy patio na zaridaina izay ahafahanao mahatsapa fofona samihafa sy manana aingam-panahy samy hafa izay tsy hananan'ny fisaka. Inona koa, tena marani-tsaina izy ary mety somary maditra, ka azo ampianarina fika izy raha ny saka ny saka no entina mampifaly azy.
Raha ampiarahina amin'ny maha alika alika azy dia ho mora aminy ny mifanerasera amin'ny alika sy saka hafa.
Mikarakara ny Mau arabo
Aza atao sakafo ny serealy. Ireo, tsy afaka levonina tsara amin'ny saka, dia mety hiteraka olana toy ny allergy. Ka raha mitadidy izany isika, ny filamatra dia ny manome sakafo tsy misy voa, na tsy misy voa, ary be proteinina amin'ny biby izany.
Na izany na tsy izany, raha manana fotoana mety hangatahana torohevitra amin'ny mpahay sakafo iray izay mahatakatra sakafo voajanahary ho an'ny felines ianao dia aza misalasala manome azy Barf. Azo antoka fa hankasitraka izany ny vatanao.
Ka ny fahadiovan'ny saka no mety zava-dehibe ny fanaovana zavatra maromaro: miborosy ny volony isan'andro, diovy ny masony sy ny sofiny raha ilaina amin'ny vokatra manokana, ary hadio koa ny boaty fakony izay esorina ny seza sy ny urine in-iray na maromaro isan'andro, ary hodiovina tsara amin'ny rano ny fitoeran-drano. sy ny fanasana vilia.
Toy izany koa andramo apetraka araka izay azo atao ny mpamatsy sy ny mpisotro amin'ny boaty misy anao, noho ny antony tena tsotra: tsy tianao ny mihinana raha manimbolo ny fofonao. Amin'io lafiny io, ny idealy dia ny sakafo sy ny rano ao amin'ny efi-trano hafa amin'ny an'ny WC anao manokana.
Ny karazana arabo Mau dia tsy mitarika aretina lehibe, ankoatr'ireo izay mety misy feline hafa. Saingy miresaka fiainana velona isika, noho izany mandritra ny fiainanao dia mety harary ianaoNoho izany, ilaina ny mitsidika matetika ny mpitsabo biby. Tsy maintsy manantona azy hanao vaksiny koa ianao rehefa ilaina izany, ary manary azy raha tsy mikasa ny hampiteraka azy ianao.
Mila manao fanatanjahan-tena be isan'andro ianaoNoho izany, zava-dehibe ny hanokananao fotoana betsaka araka izay azo atao mba hilalao aminy ary hahafahany mandoro ny heriny.
Omeo fitiavana isan'andro, saingy eny, tsy misy faneriterena na fanerena azy. Makà fotoana kely isan'andro hahalalana ny fitenin'ny vatany. Hanatsara kokoa ny fifandraisanareo izany. Andramo ihany koa ny manome azy zava-mahadomelina sakafo mahandro na saka-saka indraindray mba hampifaly azy kely.
Ary koa, tokony hihazona azy miaraka ianao, miezaha hanao azy ho fianakaviana.
Inona ny vidin'ny Mau arabo?
Ianao ve mitady ny vidin'ny saka arabo Mau? Raha manamafy ny valinteninao dia tokony ho fantatrao ny momba azy 600 euros raha azo amin'ny hatchery izany. Raha te hividy azy amin'ny fivarotana biby ianao dia ho kely kokoa ny vidinao, 300-400 euro eo ho eo.
Aza adino anefa fa ny saka dia tsy maintsy roa volana farafahakeliny, satria amin'izany no hosarahi-nono ary hanomboka hihinana sakafo henjana.
Sarin'ny saka arabo Mau
Ny saka Mau Arabo dia manana endrika ivelany izay hahatonga anao ho tia eo noho eo. Noho io antony io dia te-hametaka sary vitsivitsy izahay mba hahitanao azy ireo:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Ilay saka arabo Mau mpanao fanatanjahan-tena
Salama, Misaotra tamin'ny lahatsoratra!
Manana saka Mau Arabe natsangana izahay tany Dubai izay niara-niverina taminay tany Espana. Ny famaritana ato amin'ity lahatsoratra ity dia tanterahina saika amin'ny taratasy.
Toa misy fitenenana mamintina ny toetran'ireto saka ireto: "raha tsy mahazo alika ianao dia mahazo Mau." Raha tsy afaka manana alika ianao dia makà Mau.
Tianay ny mihaona amin'ny tompona Mau hafa (Arabo, Egyptianina) any Espana
Miarahaba ny saka 🙂
Bobtail Japoney, saka tatsinanana tia fiaraha-monina sy be fitiavana